Zimbabwe: Kasukuwere Returns Home, Questioned By State Agents At Airport - allAfrica.com
Zimbabwe: Kasukuwere Returns Home, Questioned By State Agents At Airport
Former cabinet minister Saviour Kasukuwere returned home this Tuesday afternoon amid speculation he will seek to take over as leader of opposition National Patriotic Front (NPF) leadership after the party's congress.
"Our police officers are going to interview him as a way of establishing how he went outside the country and from there he will be advised of what the police will do thereafter," said Charamba from Mutare where the ZRP brass is on a tour of the provinces.
Moyo and Zhuwao have however, reacted with fury to Kasukuwere's decision to return home, scorning their former ally as a sell-out for reportedly negotiation a safe return with the Mnangagwa government.
The protestors, together with a scrum of journalists, missed a sighting of Kasukuwere as he was whisked away by businessman Agrippa Masiyakurima, better known as Bopela in a Mercedes Benz vehicle immediately after being released from over an hour's detention by State agents at the airport.
According to NPF spokesperson Jealousy Mawarire, a press conference will be convened to announce Kasukuwere's return.
Lawyer Alec Muchadehama, his brother the minister's Daniel and now NPF member Jim Kunaka were at the airport to welcome the former Zanu PF commissar.
Kasukuwere reportedly failed to negotiate a return deal with Mnangagwa's government and will likely face prosecution over corruption allegations raised against him.